नियमित मन्दिर जानुहोस्, यस्ता घातक रोगबाट बचिनेछ - ज्ञानविज्ञान
हामीमध्ये यस्ता धेरै व्यक्ति हुन्छन्, जो दिनको शुरुवात पूजा–पाठबाट गर्छन् । व्यस्त जीवनशैलीका कारण मन्दिर जान नपाए पनि धेरैले आफ्नै घरमा पूजाकोठा तथा सानो मन्दिर बनाएका हुन्छन् ।
घरमा मन्दिर हुँदा सकरात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ । जो परिवारका लागि पनि राम्रो मानिन्छ । तर घरमा भन्दा पनि बाहिरको (ठूलो) मन्दिर जाँदा धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र हैन, वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि फाइदाजनक हुन्छ ।सायद तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ कि, मन्दिर जानु तपाईको स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक सावित हुन्छ ।
ब्लड प्रेशरमा असर
मन्दिरभित्र नाङ्गो (खाली) खुट्टाले प्रवेश गर्नाले त्यहाँको सकरात्मक उर्जा हाम्रो खुट्टाको माध्यमबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्छ । खाली खुट्टाले हिँड्दा खुट्टामा रहेको प्रेशर प्वाइन्ट्समा दवाब पर्छ । जसकारण उच्च रक्तचाप (हाइ ब्लड प्रेसर) नियन्त्रणमा आउँछ ।नियमित मन्दिर जाँदा मुटुका रोगीलाई समेत फाइदा पुग्छ । मन्दिरको शीतल वातावरणले आत्मविश्वास बढाउँछ ।
मन्दिर जानाले तपाईमा एकाग्रता बढ्छ । मन्दिरको वातावरणले शान्त रहने तथा आक्रोश कम हुने हुन्छ । यस्तै निधारमा चन्दन लगाउनाले पनि दिमाग शान्त हुन्छ ।
ऊर्जाको स्तर बढ्छ
वैज्ञानिक अध्ययनबाट यो पत्ता लागेको छ कि, मन्दिरमा गएर घण्टी बजाउँदा मानिसमा सकरात्मक ऊर्जाको स्तर बढ्छ । एकचोटी घण्टी बजाउँदा ७ सेकेण्डसम्म त्यसको आवाज हाम्रो कानमा गुन्जिन्छ । त्यस दौरान शरीरमा शान्ति मिल्ने ७ प्वाइन्ट पनि सक्रिय हुन्छन् । जसले हाम्रो शरीरमा इनर्जी लेभल बढाउँछ ।
तनावबाट मुक्तिका लागि
मन्दिरको शान्त वातावरण र शंखको आवाजले हामीलाई मानसिक रुपमा शान्ति र सकरात्मक शक्ति प्राप्त हुन्छ । यसले तनाव दूर गर्छ ।
मन्दिर जानाले तपाईको मनमा आउने अनावश्यक सोचहरु हट्छन् । मन शान्त हुन्छ । जसकारण राति सुत्दा पनि राम्रो निद्रा आउँछ ।
Don't Miss it शास्त्र अनुसार कस्ता ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ?
Up Next कतै तपाईंमा यस्ता लक्षणहरु देखा परेको त छैन ? मृगौला खराब भएको हुनसक्छ